I-Asteria Business Studio C - I-Airbnb
I-Asteria Business Studio C
Indawo ekukho umntu oncedisayo kuyo yonke sinombuki zindwendwe onguOrvie
I-Asteria Studios isembindini weParamaribo, kwindawo ezolileyo phakathi kweKwatta neZorg en Hoop. Izitudiyo zixhotyiswe ngokupheleleyo kwaye zinefanitshala. Unako kwakhona ukuzipholisa kwi-swimming pool.
Izitudiyo ze-Asteria zibonakalisa umabonakude, umoya wokupholisa umoya, iWiFi yasimahla (i-6MB yokukhuphela eyona nzame ilungileyo), ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye negumbi lokuhlambela labucala.
Isitudiyo sinebhedi ephindwe kabini ephangaleleyo, ukongezelela kukho umnatha wokuthintela iingcongconi.
Ikhitshi lixhotyiswe nge-microwave, iketile, iSenseo kunye nefriji. Ukupheka kwakhona kunokwenzeka kwiihobs ze-ceramic.
Idesika/indawo yokusebenza iyafumaneka (Kubandakanya isibane sedesika, imonitha/iTV kunye nepad yemouse (igalelo leVGA/DVI).
I-Asteria studios ikumbindi weParamaribo, kwindawo ethe cwaka phakathi kweKwatta neZorg en Hoop. Yindawo efanelekileyo, embindini wesixeko, indlela yeringi, i-Uitkijk kunye ne-Comewijne zifumaneka lula.
I-Asteria studios ifumaneka kufutshane neSibhedlele Sezemfundo iParamaribo, iSibhedlele iDiakonessen, iSt. Isibhedlele iVincentius ngoko silungele abantu. Iziko loshishino likumgama wemizuzu eyi-10 (ngemoto). Oonozakuzaku abahlukahlukeneyo bafumaneka kufutshane nezitudiyo. Ukongezelela, iAnton de Kom University kunye neFaceulteit of Medical efumaneka kumgama wokuba ungahamba ngeenyawo.
I-Asteria ikwiikhilomitha eziyi-5 ukusuka e-Waterkant naseWermolenstraat. Ikufutshane neekhilomitha eziyi-33 ukusuka e-White Beach kunye neekhilomitha eziyi-50 ukusuka e-Pengel Airport.
Umbuki zindwendwe ngu- Orvie
Ezi zibonelelo zibandakanya ukucoca (izihlandlo ezi-2 ngeveki), yaye abasebenzi bafumaneka yonke imihla ukususela ngo-08:00 ukuya ku-14:00 ukuphendula nayiphi na imibuzo. Abalawuli bethu uKevin noEvelyn bahlala bekulungele ukunceda. Ukongezelela, amanenekazi ethu okucoca uElisa noVanessa aluncedo kakhulu.
Ezi zibonelelo zibandakanya ukucoca (izihlandlo ezi-2 ngeveki), yaye abasebenzi bafumaneka yonke imihla ukususela ngo-08:00 ukuya ku-14:00 ukuphendula nayiphi na imibuzo. Abalawuli…
Ixesha lokubhalisa xa ufika: 08:00 - 02:00